वीपी जीवित हुनु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला ? | रुपान्तरण
वीपी जीवित हुनु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला ?
२२ भाद्र २०७६, आईतवार १८:०९
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले ‘बीपी कोइरालाको डायरी (२००८–२०१३)’ बिमोचन गरेका छन ।
बिमोचन समारोहमा डा.कोइराला सहित नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला र नरहरि आचार्य उपस्थित थिए । कांग्रेसका युवानेता गगन थापा अतिथिका रुपमा निम्त्याइए पनि समारोहमा आएनन ।
समारोह आयोजकका अनुसार, ‘गगनजी आउँछु आउँछु भन्नुभयो । तर आउनु भएन ।’ समारोहमा बोल्दै महामन्त्री शशांक कोइरालाले बताए, ‘यतिखेर मेरो मनमा सम्झनाको बाढी आउँछ । बीपी जीवित हुनु भएको भए अहिलेको राजनीति हेरेर के भन्नु हुन्थ्यो होला ?’
शशांकले बीपीसंग म के पढौं भनेर सल्लाह मांग्दा बीपीले भन्नु भएको थियो – जे मन लाग्छ त्यही पढ । जे पढछौ त्यसमा आफनो पूरै प्रयत्न लगाउनु । बीपी आफूले पनि देशमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि आफनो पूरै जीवन लगाउनु भयो । उहाँको जीवनकालमा त्यो सम्भव भएन ।
अन्तिम समयमा उपचारका लागि थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक लगिनु भएका बीपीले आफनो कानमा खुसुक्क ‘म यहाँ मर्न चाहन्न । मलाई नेपाल लैजाओ’ भन्नु भएको संझना गरे शंशाकले । त्यसपछि आफूले गिरिजाबाबुसंग सल्लाह गरेर बीपीको अन्तिम इच्छा पूरा गरेको पनि उनले बताए ।
शिखा बुक्सबाट प्रकाशित बीपी कोइरालाको डायरीको संकलन र सम्पादन लोकतान्त्रिक समाजवादका प्रखर अभियन्ता पदमबहादुर थापाले गरेका हुन ।